मलाई माफ छोरी ! तिमी बाबा आउनु भन्दै रोइरहेकी थियौ तर म आउनै सकिनँ’ – Khabar Patrika Np
मलाई माफ छोरी ! तिमी बाबा आउनु भन्दै रोइरहेकी थियौ तर म आउनै सकिनँ’
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०५, २०७८ समय: २०:४८:५३
काठमाडौं : इजरायली हवाई आ’क्र म’णमा ध्व’स्त भएको घरभित्र पुरिएकी गाजाकी छ वर्षीया बालिकाको सात घन्टापछि सकुशल उ’द्धार गरिएको छ। सुजी एस्कुन्ताना नामकी ती बालिकालाई अहिले गा’जाको सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ।
गा’जाका वि’द्रोही सैन्य समूहको टनेल सिस्टमलाई लक्षित गरी गरिएको आ’क्र म’णमा ए’स्कुन्तानाको घर पनि परेको थियो । दर्जनौं उ’द्धारकर्ता, प्रहरी अधिकारी र आफन्तले उनको परिवारको खोजी गरेका थिए ।
अस्पतालमा पुगेका आफन्तहरू सुजीका अरू भाइबहिनीको मृ,त्युको खबरले म’र्माहत भएका देखिन्थे। सुजीलाई सामान्य चो’ट लागे पनि उनको अवस्था ग’म्भीर छैन। उनको एक्स-रे गरेपछि डाक्टरहरूले उनलाई बुवासँगैको बेडमा ल्याएर राखिदिएका हुन्।